Beesha Caalamka oo uga digtay Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya... | Universal Somali TV
Beesha Caalamka oo uga digtay Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ku dhaqanka musuqmaasuqa
December 30 2016 13:43:08
Beesha caalamka ayaa uga digay baarlamaanka cusub ee Soomaaliya arimaha ku dhaqanka musuqmaasuqa, iyagoo carabka ku adkeeyay baahida loo qabo inuu dalka horay u tallaabsado iyadoo Xildhibaanada cusub lagu wadaa in ay doortaan Madaxweynaha soo socda.
dalka ayaa dhawaan la caleemo saaray Baarlamaanka tobnaad xaflad taasoo 283 xubnaha baarlamaanka (MPs) loo dhaariyay xilka. *
Afartan iyo kow ka mid ah Xildhibaanada ayaa noqon doonaan senatorada Aqalka Sare, halka 242 ay noqon doonaan xubnaha ka mid ah Golaha Shacabka.
Soomaaliya ayaa dagaal ku jirta muddo ka badan rubuc qarni , laakiin diblomaasiyiinta iyo muwaadiniinta ayaa rajaynayaa hanaanka siyaasadeed ee hadda ay ka caawin doonto islamarkaana ay keento xasiloonida.
Dowladda Soomaaliya oo ay taageerto Qaramada Midoobay ayaa ku xidhan dhaqaalaha shisheeye inay ku daboolaan baahiyaha ciidamada qalabka sida iyo kuwa ka socda ee ka mid ah 22,000 oo ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika.
Kan-xigaMadaxweynaha Burundi oo si adag ugu h...
Kan-horeMadaxweynaha Somaliya oo maanta xarig...
34,195,703 unique visits